Farmaajo oo Khadka Taleefonka kula hadlay Uhuru kadib weerarkii Nairobi
MUQDISHO, Somalia - Madaxweyne Farmaajo ayaa maanta khadka Taleefonka kula hadlay dhigiisa Kenya, Uhuru Kenyatta, kadib weerarkii hotel-ka Dusit D2 ee magaalada Nairobi.
Farmaajo ayaa uu sheegy Uhuru in Somalia ay garab taagan tahay Kenya xilligan adag ay ku jirto, isagoo dhanka kale tilmamay in dowladda Federaalka ay diyaar u tahay in dalalka deriska ah kala shaqeyso la dagaalanka argagaxisada iyo ciribtirkooda.
Labada hogaamiye ayaa wadahadalkooda waxa uu ku qotomay weerarkii ay dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ku ekeeyeen Hoteelka qaaliga ah ee Dusit-ka 2aad, halkaasi oo lagu dilay in ka badan 21 ruux.
"Waxaan telafoonka kula hadlay Madaxwayne Uhuru Kenyatta [subaxnimada Khamiista]. Inaga waxaan garab taagan nahay Kenya mar-xaladaan adag," ayaa laga soo xigtay Madaxwayne Farmaajo.
Kooxda Al-Shabaab ee xiriirka la leh Urur-waynaha Al-Qaacida ayaa sheegatay weerarkaan, kaasi oo noqonaya midkii ugu cuslaa Lix sano kadib toogashadii Westgate Mall, halkaasi oo lagu dilay 60 qof.
Madaxwaynaha Soomaaliya oo hadalkiisa sii wata ayaa ku nuux-nuux saday in dowladiisu ay ka go’an tahay sidii loo dabar-jari lahaa kooxaha argagaxisada ah oo gobolka kusii baahayay sanadihii udambeeyay.
"Dowlada Somalia waxay mar kasta diyaar u tahay inay kala shaqayso deriskeena dhamaan dadaalada lagu joojinayo, lagu ciribtirayo iyo lagu wiiqayo dhaqamada xun ee argigixisada," ayuu hadalkiisa kusoo xiray Farmaajo.
Al-Shabaab oo la aas-aasey 2006-dii ayaa laga saarey magaalada caasimada ah ee Muqdisho markii ciidamada AMISOM ay dalka yimaadeen, balse, tan iyo xiligaasi waxay bedashay xeeladeeda dagaal taasi oo ay ku dishay boqolaal ruux.
Kenya oo shaacisay magaca ninkii isku qarxiyay Dusit hotel ee Nairobi
Afrika 18.01.2019. 23:54
Go'aanka Maxkamadda ayaa lagu shaaciyay in la hayo shaqsiyaad ku lug leh weerarka.
Hooyo dhashay ninkii abaabulay weerarkii Dusit hotel oo dacwad culus wajaheysa
Afrika 23.02.2019. 10:44
Nin ka dambeeyay Qaraxyo ka dhacay Muqdisho oo la toogtay
Soomaliya 24.12.2018. 10:49
Safiirka Mareykanka oo markii labaad Farmaajo ugu yeeray Safaaradda
Soomaliya 21.02.2019. 11:31
Farmaajo: Qaraxyada Muqdisho wax loogama qaban karo 2 sano [Daawo]
Soomaliya 05.03.2019. 11:33
Mareykanka iyo Ingiriiska oo muwaadiniin looga dilay weerarkii Hotel-ka Nairobi
Afrika 16.01.2019. 10:29
Soomaliya 21.12.2018. 20:07
Dib u dhac ku yimid furitaanka kalfdhiga baarlamaanka maamulka Somaliland 30.05.2020. 15:30